Semalt बाट सुझावहरू एनालिटिक्सबाट स्प्याम रेफरलहरू हटाउँदा
वेबमा आज स्प्यामी रेफरलहरूको संख्या शिखरमा जारी छ। ग्राहकहरूको वेबसाइटसँग सम्बन्धित केही एजेन्सीहरूले घटनाहरू रिपोर्ट गरेका छन् जहाँ स्प्याम्मी रेफरलहरू तिनीहरूको गुगल एनालिटिक्स रिपोर्टहरूमा देखा पर्दछ। विश्लेषणात्मक रिपोर्टहरूबाट सकेसम्म चाँडो रेफरल स्पाम मेटाउन मद्दत पुर्‍याउने कदमहरू चाल्नु यो आवश्यक छ। तिनीहरू प्रदर्शन तथ्या in्कमा skewness को एक स्रोत हो, परिणामस्वरूप साइटको अपरेशन्सको गलत अर्थ लगाउँदछ। यसले साइटमा भ्रमण गर्ने प्रयोगकर्ताहरूलाई जोखिम पनि दिन्छ। कारण यो हो कि यी प्रयोगकर्ताहरूले सन्दर्भकर्ताको साइट भ्रमण गर्न र उनीहरूको कम्प्युटर प्रणालीहरूमा भाइरस वा ट्रोज्यानले संक्रमित हुन सक्ने बनाउन सक्दछन्।
गुगल एनालिटिक्स रिपोर्टहरूका लागि स्प्याम लिंकहरू हटाउने धेरै तरिकाहरू छन्। यी प्रविधी को प्रत्येक आफ्नो merits छ, तर निम्न विधि, Artem Abgarian, को वरिष्ठ ग्राहक सफलता प्रबन्धक द्वारा निर्दिष्ट Semalt , सबै भन्दा कुशल हुन विश्वास छ। यसले रेफरल स्पामसँग सम्बन्धित धेरै जसो जोखिमहरूलाई कम गर्दछ।
प्रक्रिया सुरू गर्न तपाईको गुगल एनालिटिक्स प्रोफाइल खोल्नुहोस्, र फिल्टर सेटिंग्स लागू गर्न को लागी अवलोकन गर्नुहोस्। फिल्टरहरू कार्यान्वयन गर्ने बखत नयाँ दृश्य सिर्जना गर्न याद गर्नुहोस् र कच्चा डाटाको स्रोतको रूपमा कार्य गर्न अनफिल्टर गरिएको छोड्नुहोस्, र यदि लाइनमा केही गडबडी भयो भने ब्याकअप पोइन्ट।
१. बोट फिल्टरि।
यो Google एनालिटिक्समा नयाँ फिचर हो जसले विश्लेषक रिपोर्टहरूमा बोट हेर्ने केही फिल्टर गर्दछ। यसले सम्पूर्णको लागि रेफरल स्पामलाई मेटाउँदैन, तर यसले राम्रो सुरुवात विन्दुको रूपमा काम गर्दछ। तपाईले फिल्टर गर्न चाहानु भएको दृश्य प्रोफाइलबाट सेटि Selectहरू चयन गर्नुहोस्। यस पृष्ठको तल एक बाकस खुला बाँकी छ, प्रयोगकर्तालाई ज्ञात बोटहरू र माकुराहरूबाट सबै यातायात बहिष्कार गर्न प्रोम्प्ट गर्दै। यसलाई जाँच गर्नुहोस्, र तपाइँ अब जान तयार हुनुहुन्छ।
२. रेफरल बहिष्करण थप्दै
यो एकदम सीधा छ तर बोट फिल्टरिंग भन्दा अलि बढी प्रयासको आवश्यक पर्दछ। GA मा प्रशासन सेक्सनमा, सबै फिल्टरहरू चयन गर्नुहोस्, र शीर्षमा नयाँ फिल्टर (रातो बटन) सिर्जना गर्न विकल्प छ। खाता स्तर सेटअप लागू गर्न र व्यवस्थित गर्न सजिलो छ। यो सम्भव छ यदि हालको प्रयोगकर्तासँग वेबमास्टरबाट सम्पादन गर्न अनुमति छ।
फिल्टरलाई वर्णनात्मक नामको साथ नाम दिनुहोस् जस्तै "हटाउनुहोस् (साइट)"। यो फिल्टर प्रकारमा कस्टम फिल्टर हुनुपर्दछ। बाह्य बटन जाँच गर्नुहोस्, र फिल्टर फिल्डको ड्रप-डाउन मेनूबाट, "रेफरल" चयन गर्नुहोस्। URL फिल्टर गर्नुहोस् जुन तपाइँ फिल्टर ढाँचामा समावेश गर्न चाहानुहुन्छ। तल क्षेत्रमा स्क्रोल गर्नुहोस् जहाँ प्रयोगकर्ताले छनौट गर्दा कुन सेटि applyहरू लागु हुन्छ। एउटामा क्लिक गर्नुहोस् र सूचीमा थप्नुहोस्, त्यसपछि बचत क्लिक गर्नुहोस्।
Test. परीक्षण र प्रमाणित गर्नुहोस्
यो प्रक्रियाको अन्तिम चरण हो जसमा Google विश्लेषक रिपोर्टहरूलाई अर्को दुई हप्ताको लागि निगरानी समावेश गरीरहेको छ फिल्टरहरूको ठाउँमा काम भइरहेको छ कि छैन भनेर हेर्नका लागि। यस प्रक्रियाको सुरूमा एउटा स include्केत चिन्ह समावेश गर्नु महत्त्वपूर्ण छ किनकि यसले फिल्टरि started सुरु हुनुभन्दा पहिले किन यति धेरै ट्राफिक थियो भनेर दर्साउँछ। यदि त्यहाँ केही दृश्यात्मक परिवर्तनहरू छन् भने, यो अब मुख्य दृश्यमा फिल्टरहरू लागू गर्न सुरक्षित छ। त्यहाँ स्प्याम बट्स अनलाइनको लामो सूची छ, र नयाँ दिनहुँ नयाँ थप्दै, साइट मालिकलाई अप्राकृतिक ट्राफिक डेटा पहिचान गर्न मद्दत गर्न र सूचीमा भएकोसँग यसको तुलना गर्न।